Mankeo amin'ny loharanon'ny fahazavana
« Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an’ ny kely saina ». Sal. 119:130
Zava-mitranga matetika ny hoe olon'ny fahalalana ara-tsaina, nampian'ny fanabeazana sy kolon-tsaina, no tsy mahatakatra ny ambaran'ny andininy sasantsasany ao amin'ny Soratra Masina, kanefa olona hafa tsy nahita fianarana, ary toa votsa saina sy tsy manana saina mahay mandanjalanja no mahatakatra ny heviny, mahazo hery sy fampaherezana avy amin'izany izay ambaran'iry voalohany ho zava-miafina na tsy mampiraika azy fa tsy dia ilaina loatra. Nahoana no izany? Nohazavaina tamiko fa tsy niankina tamin'ny fahalalany ireto farany. Nankeo amin'ny Loharanon'ny fahazavana izy ireo, Ilay nanome tsindri-mandry ny Soratra Masina, ary tamim'ny fietren'ny fo no nangatahiny tamin'Andriamanitra fahendrena, koa nandray izany izy ireo. Misy maro ny harena miafin'ny fahamarinana izay tokony mbola ho hitan'ny mpandinika mahatoky. Nasehon'i Kristy fa toy ny harena nafenina tany an-tsaha ny fahamarinana. Tsy hita ety ivelany izany; tsy maintsy mihady izany isika. Tsy miankina amin'ny hakingan-tsaina loatra ny fahitana izany, fa amin'ny fietren'ny fo sy finoana izay mifikitra amin'ny fanampian'Andriamanitra.
Raha tsy misy ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia lasa manolana mandrakariva ny Soratra Masina na mandray an-tendronny an'izany isika. Betsaka ny famakiana ny Baiboly no tsy mitondra voka-tsoa ary matetika tsy mahasoa akory. Rehefa sokafana tsy amim-panajana sy tsy amim-bavaka ny Tenin'Andriamanitra, rehefa tsy mifantoka eo amin'Andriamanitra na tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny fisainana sy ny fironana, dia hohajambain'ny fisalasalana ny saina, mihamahazo vahana ny fisalasalana eo amin'ny fianarana marina ny Baiboly. Fehezin'ny fahavalo ny fisainana, ary manoro hevi-diso amin'ny hevitry ny teny izy.
Na oviana na oviana no tsy maniry ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny teny sy amin'ny asa, ny olona, na dia manam-pahalalana aza izy, dia ho diso lalana amin'ny fahazahoany ny Soratra Masina, ary tsy azo atao ny matoky ny fanazavana ataon'izy ireo. Raha tena maniry marina ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra isika, dia raisin'ny Fanahy Masina ireo fitsipika ao amin'ny Teniny ary ataony ho lasa fitsipi-piainana izany ka soratany eo amin'ny vato fisaky ny fanahy. Ary ireo izay manaraka ny fahazavana efa nomena azy no afaka manantena ny handray tsilon-tsaina lalin-dalina kokoa avy amin'ny Fanahy.